Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs calls in Ambassador of Bangladesh to Myanmar – Ministry of Foreign Affairs
Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs calls in Ambassador of Bangladesh to Myanmar
(Nay Pyi Taw,4November 2019)
U Soe Han, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar called in H.E. Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury, Ambassador of Bangladesh to Myanmar, at 1500 hrs on4November 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
During the meeting, the Permanent Secretary and the Bangladeshi Ambassador exchanged views on matters pertaining to bilateral relations and repatriation of displaced persons.
Moreover, the Permanent Secretary discussed the matter related to the visit of the Evidence Collection and Verification Team (ECVT) of the Independent Commission of Enquiry (ICOE) to Bangladesh in November 2019 and handed over the letter addressed to H.E. Dr. A. K. Abdul Momen, Minister of Foreign Affairs of Bangladesh, from Mr. Kenzo Oshima, Member of the Independent Commission of Enquiry (ICOE), to the Ambassador of Bangladesh.
The Permanent Secretary called to the attention of the Ambassador regarding the Press Release issued by the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh on 30 October 2019, and stressed that the contents of the Press Release is in no way contribute to the good neighbourly relations between the two countries and not help the implementation of the repatriation process that is to be conducted in accordance with the bilateral agreements between Myanmar and Bangladesh.
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီးကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ
(၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury အား ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ၁၅၀၀ နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံအမတ်ကြီးတို့သည် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်သည် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် (ICOE) ၏ Evidence Collection and Verification Team (ECVT) ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း သွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ICOE အဖွဲ့ဝင် Mr. Kenzo Oshima ထံမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Dr. A. K. Abdul Momen ထံသို့ လိပ်မူပေးပို့သည့် စာမူရင်းအား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီးထံ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၃၀-၁၀-၂၀၁၉ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များသည် နှစ်နိုင်ငံ အိမ်နီးချင်းကောင်း ဆက်ဆံရေးကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ရရှိထားသည့် သဘောတူညီချက်များနှင့်အညီ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးကိုလည်းကောင်း မည်သို့မျှ အထောက်အကူ မပြုကြောင်း သံအမတ်ကြီးအား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။